Iifonti zasimahla zale Nyanga kaSeptemba | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ngeyure nganye edlulayo, iyenzeka ngaphezu 19.280 amawaka yoyilo kwihlabathi liphela, ngenxa yokuba kukho umsebenzi omninzi ekufuneka wenziwe, kubalulekile ukuba eli candelo libe nefonti entsha neyahlukileyo kwaye kukuba ekupheleni kosuku, ubuchwephesha buya kuba nexabiso elikhulu kuzo zonke iintlobo zeeprojekthi, kwaye yinto engenakuphikwa.
1 Ifonti elungileyo ilongeza njani ixabiso kwiprojekthi?
2 Iifonti zasimahla ngenyanga kaSeptemba
2.1 Ngaphandle kweCove
2.3 Uxolo ngaphandle
2.4 Uluhlu lokudlala olusimahla
2.6 Uhlobo lweZero
Ifonti elungileyo ilongeza njani ixabiso kwiprojekthi?
Kuyamangalisa ukuba ifonti elula okanye izinto ezinje isithuba phakathi koonobumba, iyakwazi ukuchaphazela ngokuthe ngqo indlela abafundi abavakalelwa ngayo malunga noyilo okanye enye uyilo
Ukukhetha ifonti elungileyo kuhlala kwenza umahluko phakathi kokuba umfundi engathathi ixesha lokufunda umxholo, oko kuthetha ukuba unethuba lokwenza yonke into ibe lula kakhulu ngokukhetha eyona ilungileyo nefanelekileyo kuyilo lwakho.
Ngesi sizathu nakweli nqaku sifuna ukukubonisa imithombo eya kuthi ikholise zonke iintlobo zabafundi, ke akufuneki ukuba zilahleke kwilayibrari yakho.
Siza kukubonisa imigca emitsha, ethi banesakhiwo esihle kwaye ziluncedo kakhulu ekwenzeni iprojekthi yakho elandelayo ibe lula. Khumbula ukujonga iphepha-mvume lakho, njengoko linokusebenziseka ngokupheleleyo okanye lisetyenziselwe wena.
Iifonti zasimahla ngenyanga kaSeptemba
Yifonti yasimahla leyo ineejika eziqhelekileyo, ke ilungele izihloko kunye noyilo lwe logo. Ikwanazo iintlobo ezimbini zobunzima, isibindi kunye nokukhanya.
Ngumthombo Isimahla efumaneka kuzo zombini izinto zobuqu kunye nezentengiso.
Ngumthombo ofanelekileyo wokuphuhlisa iiprojekthi nge- I-typography elula kunye noxolo. Ingasetyenziswa nangayiphi na indlela, ikwafumaneka simahla.
Iqukethe ifonti ebhalwe ngesandla enayo izitayile zebrashi ezomileyo. Inezitayile ezintathu, i-Ornament, iScript, kunye neeCaps, ezinokudityaniswa ukuze ziyile uyilo oluhle nolugqibeleleyo. Inga sebenzisa le fonti kuzo zonke iintlobo zeenjongo, nokuba yeyomntu okanye yeyentengiso, ngaphandle kokuba ilungele amakhadi emibuliso, izimemo zomtshato, uyilo ezikipa, phakathi kwabanye.
Le fonti ineenguqulelo ezahlukeneyo; Le itemplate ilungele zombini iipowusta kunye nezinto ezimbi ezinesihloko.
Yiyo Ifonti yeJometri esekwe kwigridi, le yile gridi inye isetyenzisiweyo xa kuyilwa ii-glyphs, "M" kunye "W". Kuvela ukuba zilungele izihloko kunye neepowusta kunye neelogo, kwaye isimahla kwaye inelayisensi yokusebenzisa intengiso.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » Izibonelelo » Imithombo » Iifonti zasimahla zenyanga kaSeptemba
UNataly Castaneda sitsho
Phendula kuNataly Castañeda
Imithombo elungileyo kakhulu, enkosi ngolwazi
UMarta Santidrian sitsho
Ndifuna ukukhuphela ifonti kweli phepha kwaye andazi ukuba inokwenziwa njani
Phendula uMarta Santidrian